प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कर्मचारीलाई दिए अहिले सम्मकै कडा चेतवानी, सरकारले खटाएको ठाउँमा नगए यस्तो सम्म हुने (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्) – पुरा पढ्नुहोस्……
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कर्मचारीलाई दिए अहिले सम्मकै कडा चेतवानी, सरकारले खटाएको ठाउँमा नगए यस्तो सम्म हुने (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको स्थानमा जानै पर्ने बताउनुभएको छ ।
“खटाएको ठाउँमा जान्न भन्ने कर्मचारीलाई अघिल्लो सरकारले विशेष सुविधासहितको अवकाश योजना ल्याएर घर पठाउने निर्णय गरेको रहेछ”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकार अनुभवी कर्मचारीलाई घर पठाएर नयाँ कर्मचारी नियुक्त गर्ने पक्षमा छैन । सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानुपर्छ ।”
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको बधाई ग्रहणपछि आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीको पेशागत मर्यादा र सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
जागिर शुरु गर्दाको शर्तअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा जनताको सेवा गर्न कर्मचारी अनिवार्य रुपमा जानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश बनाउन अब कुनै पनि बहानामा ढिला गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पुरानो शैली र ढाँचाले देशको विकास प्रक्रियाले गति लिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“देशको विकास गर्ने कुरामा अब ढिलाढाला गर्न सकिँदैन”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सबैले नयाँ ढंगले सोचौं, नयाँ कामको थालनी गरौँ ।”
कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि पनि सेवा प्रवेश गर्दाको शर्त लागू हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । “नगरपालिकामा सरुवा हुँदा बढुवा नहुने, प्रदेशमा सरुवा हुँदा फेरी संघमा आउन नपाइने भन्ने हुँदैन”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीलाई देशभित्र जता पनि खटाउन सकिन्छ । तर जहाँ गयो त्यहीँ सीमित भएर बस्नु पर्दैन ।”
कर्मचारी स्थायी सरकार भएकाले उसको सहयोग बिना कुनै पनि सरकारले छिटो छरितो ढंगले काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टोक्ति थियो । “हिजो कर्मचारीबाट पनि केही तलमाथि भयो होला”–प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिजो देशको अवस्था पनि बिग्रिएको थियो । सरकारको नेतृत्व पनि बिग्रिएको थियो । तर अब सबै कुरा सुध्रिएका छन् । त्यसकारण कर्मचारी पनि समयअनुसार चल्नु पर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारीलाई विकासमुखी, जनमुखी, सेवामुखी र सुशासनमुखी भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाको नेतृत्वको टोलीले निजामती क्षेत्र सुधारका लागि ११ बुँदे सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।
ताप्लेजुङ — एक लाख २७ हजार जनसंख्या रहेको जिल्लामा ११ हजार निरक्षर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा कार्यालयले स्थानीय तह र माध्यमिक विद्यालयसँगको समन्वयमा गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
शिक्षा कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी निरक्षर सिरिजंघा गाउँपालिकामा छन् । यसपछि फुङलिङ नगरपालिका र मैवाखोला गाउँपालिकामा झण्डै हाराहारिको संख्यामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सिरिजंगामा एक हजार छ सय ३५ जना निरक्षर छन् । नगरपालिकामा एक हजार पाँच सय ५३ रहेका छन् भने मैवाखोला गाउँपालिकामा एक हजार ५ सय १९ छन् । एक नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा सबैभन्दा कम याङवरक गाउँपालिकामा ६ सय ७१ जना छन् ।
कार्यालयका अनुसार आठराई त्रिबेणी गाउँपालिकामा एक हजार तीन सय ३९ मेरिङदेनमा एक हजार एक सय ५६ मिक्वाखोलामा एक हजार २ सय २९ फक्तालुङमा आठ सय ३५ र सिदिङवा गाउँपालिकामा एक हजार ५० निरक्षर छन् । फक्तालुङ गाउँपालिकाको ४ देखि ७ नम्बर वडासम्म भने यसअघि नै साक्षर भइसकेको शिक्षा अधिकारी चैतन्यप्रसाद निरौलाले जनाए । ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र (रिड) नेपालले साक्षर बनाएको उनले बताए ।
साक्षर वडा घोषणा हुन भने बाँकी छ । निरौलाले विद्यार्थी र शिक्षक परिचालन गरेर निरक्षरको तथ्यांक संकलन गरिएको बताए । गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाध्यक्षको भेलाले माध्यमिक तहका शिक्षक र विद्यार्थी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही अनुसार माध्यमिक विद्यालयले नेतृत्व गरेर निरक्षरको नाम सहितको विवरण संकलन गरेका हुन । यस्को निगरानी जनप्रतिनिधिले गरेकाले यो आधिकारिक र भरपर्दो तथ्यांक भएको निरौलाले दाबी गरे ।
गाउँपालिकाको जनसंख्यालाइ आधार मान्ने हो भने मैवाखोला गाउँपालिका सबैभन्दा बढी निरक्षर देखिएको छ । यो प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा एमाले सचीव योगेश भट्टराइको जन्मस्थलको गाउँपालिका हो । भट्टराइले नागरिकता यहीबाट लिएका छन् भने मतदाता नामावली पनि यही छ ।
गत निर्बाचनमा उनी यो जिल्लाबाट भारी मतले बिजयी भएका हुन । ११ हजार २७ जनसंख्या रहेको मैवाखोलामा ९ हजार ५ सय ८ साक्षर छन् । १ हजार ५ सय १९ निरक्षर । यो भन्दा बढी निरक्षर रहेको फुङलिङ नगरपालिकाको जनसंख्या मैवाखोलाको भन्दा १३ हजार आठ सय २६ ले बढी छ भने सिरिजंगामा चार हजार सात सय ७९ ले बढी छ । साभार: todaynepal
Prevआजको राशिफल: वि.सं. २०७४ चैत्र ०५ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ मार्च १९ तारिख
Nextपढ्न पठाएकी छोरी केटासँग हिँडेपछि बाबुले गरिदिए छोरीको हत्या
जापानले अब सित्तैमा नेपाली कामदार लैजाने ! यस्तो हुनेछ प्रक्रिया …पूरा खबर हेरि शेयर गरौ
आँखा भरि आँसु बनाउदै भने स्वेता खड्का दिदिले गर्दा फेरी पूर्णजन्म पाए ! स्वेता दिदि भगवान हुन्…हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)